म पनि बाबुराम भट्टराई ‘का’मी’ लेख्छु’,अब सबैले एकै थर लेखौं भन्नुहुन्छ उहाँ ,सहमत ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
म पनि बाबुराम भट्टराई ‘का’मी’ लेख्छु’,अब सबैले एकै थर लेखौं भन्नुहुन्छ उहाँ ,सहमत ?
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा रहेको कथित जातीय छुवाछुतको अ’न्त्य गर्न सबैजनाले एकै थर लेख्‍नुपर्ने प्र’स्ताव गरेका छन्।
सरकारले प्रस्तु’त गरेको आगामी आ’र्थिक वर्षको बजेटमाथि आइतवार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। श्रमिक र सिल्पी दलित समुदायलाई हेपेर, अप’मानित गरेर देश अघि नबढ्ने उनले बताए।
‘श्रम गर्नेलाई हे’पेर द’लित भनेर हुन्छ। अहिले पनि जा’तीय छुवाछुतका आधारमा यसरी प्रताडित गर्न पाइन्छ?’, उनले सोधे, ‘बरु यो छु’वाछुत प्रथा हटा’उन सबैले एकै थर लेखौं। म पनि बरु बाबुराम भट्टराई ‘कामी’ भनेर लेख्‍न तयार छु। सबैले थर ए’कै लेखौं।’
उनले रुकुममा जा’तीय विभेदका नाममा गरिएको पाँ’च युवकको हत्या’लाई प्रतिक्रान्तिको संज्ञा दिए। ‘क्रान्तिको आधार इलाका रुकुममा त्यत्रो प्रतिक्रान्ति हु’न्छ भने देश कहाँ जाँदैछ?’, उनले सोधे, ‘हामीले यी बेथितिलाई हटाउनैपर्छ। एउटै झट्’कामा कि’न भत्काउन स’क्दैनौं तर सबैले साझा प्रयास गरौं।
Previous कामचाहिँ कम गर्‍याे तर को’राेनासम्बन्धी सरकारले धेरै हल्ला गर्‍याे : नेकपा सांसद सुदन किराँती
Next नेपालबारे जथाभावी न’बोल्न भारतीय मि’डियालाई मोदीको नि’र्देशन..हेर्नुहोस् ।